Xildhibaan Cabdirsaaq Cumar “Waxaan ku talinayaa in wadahadal lala galo Al-shabaab” – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirsaaq Cumar “Waxaan ku talinayaa in wadahadal lala galo Al-shabaab”
MUQDISHO, 05 FEB 2019 (KALFADHI)-Cabdirisaaq Cumar Maxamed, oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay Xaaladda amni ee Soomaaliya, Xildhibaanka ayaa sheegay in qatar amni darro ay ka jirto magaalada Muqdisho ayna sii kordhayaan weerarada Al-shabaab.
Xildhibaanka ayaa sheegay in dagaal oo kaliya aan lagaga adkaan karin Al-Shabaab, kaasoo soo socday 10kii sano ee la soo dhaafay walina aan dhamaanin, waxa uu kataliyay in miiska wada hadalka lala fariisto dadka ay ka go’do talada dagaalamayaasha Al-shabaab.
Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay Xiligii uu ahaa Wasiirka amniga Somaliya inuu u bilaabay wadahadal Dowladda iyo Al-Shabaab u dhaxeeya, balse markii xilka laga qaaday uu istaagay. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in Madaxweyne Farmaajo iyo Wasiirka uu xilka ku wareejiyay ee Maxamed Abuukar Islow uu ka dalbaday inay halkeeda ay ka sii wadaan wada xaajoodka Dowladda iyo Al-shabaab u dhaxeeya.
“Waxaan aaminsanahay in Al-shabaab lala fariisto, maxaa yeelay dagaal waan ku kala adkaan waynay, waa ogtihiin in maalin dhaweyd Mareykanka waxa uu wadahadal la galay Talibaan uu la dagaalamayay mudo ko dhow 20 sano”, ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed.
“Shabaab waa dad Soomaaliyeed waa lala hadli karaa, Kooxdaan dadka howshaan u wada waxaan qabaa in lala fariisto oo laga fekero dadka dhimanaya” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar
Xildhibaan C/risaaq Cumar ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay dadka shacabka ah ee ku dhamaanayo dhibaatooyinka amni darro ee ka jira magaalada Muqdisho. Madaxweynaha iyo Raysal Wasaraaha Soomaaliya ayuu ka dalbaday in lala fariisto Al-shabaab intii ay dadka kale lagu wayn lahaa falalka gurracan oo ay dalka ka wadaan.
Xildhibaan Magan “Shacabka Jubbaland Habeenna kuma jiifan Cadaalad”